मनोरञ्जन Archives – Page 122 of 135 – Commanderdainik.com
प्रम ओली : देशको चिन्ता लिनु नपर्ने ………..?
प्रम ओलीले देशको चिन्ता लिनुपर्ने दिन कहिल्यै नआउने बताउनुभएको छ । सरकारले देशको समृद्धि र विकासको एजेण्डामा क्रियाशील भएर काम गरेको जोड दिँदै प्रम ओलीले अब कसैले देशको चिन्ता लिनुपर्ने दिन कहिल्यै नआउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले चौतर्फी तीव्रगतिले काम गरेको छ, त्यसैले अब कसैले पनि देशको चिन्ता लिने दिन आउँदैन ।” झापाको दमक नगरपालिकाले […]
नेपाल हक्की संघले गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति राष्ट्रिय पुरूष हक्की’ प्रतियोगिता गर्ने……
नेपाल हक्की संघले ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति राष्ट्रिय पुरूष हक्की’ प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको हो । झापाको भद्रपुरमा फागुन ४ गतेसम्म हुने प्रतियोगितामा १० टोली सहभागी हुनेछन् । सात प्रदेशका ७ टोली र नेपाल पुलिस क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब तथा पाकिस्तानको एक टोलीले सहभागिता जनाउने संघले बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् जनाएको छ । पुरुषहरुको प्रतियोगिता सकिएलगत्तै […]
कांग्रेसले माघ २१ मा सरकारविरुद्ध देशव्यापी विरोधसभा र प्रदर्शन गर्ने……
प्रकाशित मिति: १४ माघ २०७५, सोमबार
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले माघ २१ मा सरकारविरुद्ध देशव्यापी विरोधसभा र प्रदर्शन गर्ने भएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको हिजोको बैठकले ७७ जिल्लामै विरोधसभा गर्ने निर्णय गरेको हो । कांग्रेसका भ्रातृ संस्था भने हिजो देखि नै विरोधमा उत्रिइसकेका छन । प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षको बेल घेराउका बीच शुक्रबार चिकित्सा विधेयक पारित गरिएपछि आक्रोशित कांग्रेसले यो लगायत ६ वटा मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर […]
केसीको जीवनरक्षा माग्दै आज देखि देशव्यापी रिले अनशन : नेपाल चिकित्सक संघ
नेपाल चिकित्सक संघले डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षा माग्दै आज देखि देशव्यापी रिले अनशन घोषणा गरेको छ । हरेक दिन १० देखि ५ बजेसम्म अनशन बस्ने संघको कार्यक्रम छ । चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरू उपत्यकामा त्रिवि शिक्षण अस्पताल र बाहिर जिल्लाका अस्पताल हातामा अनशन बस्नेछन । संघको हिजोको आकस्मिक बैठकले अर्को निर्णय नभएसम्म रिले अनशन जारी राख्ने घोषणा गरेको हो । […]
सवारी दुर्घटनामा परी सशस्त्रका एसपी बलराम पोखरेलको मृत्यु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश भट्टराईको अवस्था नाजुक….
बारामा भएको सवारी दुर्घटनामा परी सशस्त्रका एसपी बलराम पोखरेलको मृत्यु भएको छ । सोही गाडीमा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश भट्टराईको अवस्था पनि नाजुक रहेको छ । कर्मचारी मिलन केन्द्र बाराको निजगढमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएर पथलैया हुँदै कलैया फर्किन लागेको क्रममा पसहा पूलको पूर्व्तिर रोकिएको ट्र्याक्टरमा ठोकिएर ना १ झ १६३३ नम्बरको स्कार्पिओ पल्टेको […]
आजबाट शहीद सप्ताह मनाइँदै………
मुलुकको हितका लागि जीवन बलिदान गर्नेहरुको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम गरी आजबाट शहीद सप्ताह मनाइँदैछ । आजबाट १६ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ शहीद सप्ताह मनाउन लागिएको हो । लखन थापालाई नेपालको पहिलो शहीद भनिएपनि शहीद सप्ताहमा बिशेष गरी एकतन्त्रीय जहाँनिया राणा शासनविरुद्ध संघर्ष गर्ने क्रममा १९९७ सालमा शहीद भएका चार जनाको योगदानको चर्चा गर्ने गरिन्छ । […]
नेपाली कांग्रेसको चर्को विरोध पछि धरान उपमहानगरपालिकाको कर वृद्धि विवाद पुनरावोलकनमा सहमति
निक्कै विवादित बनेको धरान उपमहानगरपालिकाको कर वृद्धि विवादमा पुनरावोलकनमा सहमति बनेको छ । नेपाली कांग्रेससहित अन्य दलहरुको चर्को विरोध पछि समस्या समाधान गर्न संयुक्त सुझाव कार्यदल गठन गरिएको थियो । सो कार्यदलले मंसिर १६ गते राजश्व परामर्श समितिमा सिफारिश गरेको थियो । सो सहमतिको सिफारिशलाई राजश्वज परामर्श समितिले पुष ९ गते निर्णयसहित सिफारिश गरेपछि पुष […]
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय एकता दिवस भव्यरुपमा मनाउने…….
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय एकता दिवसको बिदा कटौती गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै पार्टीको तर्फबाट एकता दिवस भव्यरुपमा मनाउने भएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा रिपोर्टर्स क्लबद्वारा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा थापाले ‘राष्ट्रिय एकताको विषयलाई राजनीतिसँग जोड्न हुँदैन’–भने । उनले हिन्दुराज्य पुनःस्थापनाको माग फागुन मसान्तसम्म पूरा नभए आगामी चैत १ गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । राष्ट्रिय एकता […]
जबरजस्ती करणीको आरोपमा राई पक्राउ ……..
सुनसरी जबरजस्ती करणीको आरोपमा ईलाका प्रहरी कार्यालय ईटहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीका अनुसार ईहटरी उपमहानगरपालिका–१० का २३ बर्षीय रमेश राईलाई पक्राउ गरिएको हो । प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार राईले फेसबुकमार्फत चिनजान भएकी भोजपुर पावादुम्बाकी एक ३५ बर्षीया महिलालाई जागिर लगाई दिन्छु भनी गत २० गते धरान बोलाएका थिए । […]
सरकार र पत्रकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्न सके प्रेस स्वतन्त्रताको कार्यान्वयन : मुख्यमन्त्री
प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अबदेखि पत्रकारले आफ्नो अधिकारको निम्ति लडाइँ गर्नुपर्ने दिन सकिएको बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुनसरी शाखाको भवनको उद्घाटन गर्दै राईले संविधानको प्रस्तावना मै लेखिएको प्रेस स्वतन्त्रतालाई अङ्गीकार गर्दै प्रादेशिक कानुन बन्ने बताए । ‘कहिलेकाहीँ भूलवश मस्यौदा तयार पार्दा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधका वाक्य आएमा महासङ्घले ध्यानाकर्षण गराउनु पर्दछ’, […]